कांग्रेसको विरोधसभामा ओलीका कार्यकर्ताको आक्रमण - Sankalpa Khabar
कांग्रेसको विरोधसभामा ओलीका कार्यकर्ताको आक्रमण
४ फाल्गुन १८:११
महेन्द्रनगर । बैतडीमा नेपाली काँग्रेसको विरोधसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ओली पक्षका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका छन् । ढुंगाले लागेर काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् नेता साउद गम्भीर घाइते भएका छन् ।
बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–३ पनसेरामा आयोजित सभामा गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयलाई लिएर कार्यकर्ताले ढुंगामुढा गरेका हुन् । ढुंगामुढा गर्दा नेपाली काँग्रेस नेता एवं एनपी साउदसहित काँग्रेस कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । सो सभामा काँग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौला र नैनसिंह महरलगायतको सहभागिता रहेको छ ।
घटनाको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले जारि गरेको पत्र जस्ताको तस्तै
डिलासैनी घटना निन्दनीय । सत्ता उन्माद प्रस्तुत नगर्न चेतावनी ।बैतडी जिल्लाको डिलासैनीमा नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रम भइरहेकोे समयमा आज अपरान्ह प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली निकट नेकपाबाट नियोजित रूपमा गरिएको आक्रमण निन्दनीय छ ।
मेलम्चीको सुरुङमा छोडियो पानी(तस्बीरसहित)
१० फाल्गुन १५:१७
कांग्रेस नेता रानाभाटको निधन
१० फाल्गुन १४:४३
सर्वोच्चको फैसलाप्रति कांग्रेस बोल्यो– अधिनायकवाद पराजित
११ फाल्गुन १८:४६
महिला हिंसा अन्त्य हुनुपर्छ : डिला सङ्ग्रौला
१० फाल्गुन १४:३७
नेकपा नाम विवाद : २० गते निर्णय सुनाउने
१३ फाल्गुन १८:२३